Basaska Schoollada oo laga mamnuucay in ay habeenki safraan – The Voice of Northeastern Kenya
Basaska Schoollada oo laga mamnuucay in ay habeenki safraan
Laanta qaran ee badbaadada wadooyinka oo marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaanno NTSA ayaa soo saartay awaamiir cusub oo ay ku xoojineyso amarkii ay horay ugu mamnuucday in gawaarida waaweyn ee rakaabka qaada ay habeenki safraan.
Masuuliyiinta NTSA ayaa sheegay in dhamaan gawaarida basaska ah ee Schoollada dalka aan loo ogoleyn in ay ardayda qaadaan xiliyada habeenkii ah.
Gudoomiyaha laantaasi Francis Meja ayaa arrintaan ku dhawaaqay xili uu taaganyahay kiis ku saabsan shil dhawaan uu galay bas ay arday la socdeen oo ka dhacay maamul goboleedka Kisii.
Mr Meja ayaa ugu hotreynn ka dhawaajiyay in baskaasi uu si sharci darro ah u safray xili ay maamulka iyo macalimiinta Schoolkaasi ka war qabeen, taasna ay tahay masuuliyad darro, waxa uuna sidoo kale xaqiijiyay in ay sii laban-laabi doonaan dadaallada ay ugu jiraan sidii looga hor tagi lahaa shilalka qasaaraha kala duwan geysta.
Dhanka kale maamulaha Schoolka gabdhaha ee St Marys Nyamagwa oo ay dhiganayeen ardayda baska la socotay Mr Murso Kumu ayaa sheegay in ay mar walba ka shaqeeyaan sidii loo hubin lahaa nabad galyada ardayda.
Darawalka kaxeynayay gaariga galay shilkaasi oo ay ku dhinteen 4 arday ayaa maxkamadda kasoo hor muuqday isagoo wajahayay eedeymo ay ka mid tahay in uusan u diiwaan gishaneyn wadista gawaarida, waxaana lagu sii daayay damiin lacageed oo dhan nus million shilinka dlaka ah, kadib markii uu iska fogeeyay eedeymaha loo jeediyay, kiiskiisa ayaana mar kale dib loo dhageysan doonaa bisha December ee sanadkaan 2016-ka.
← 11 ruux oo ku dhintay duqeyn dhinaca cirka ah ee lagu qaaday isbitaal kuyaala waddanka Yemen
Faahfaahin dheeri ah oo kasoo baxeysa Qarax shalay ka dhacay Turkey-ga →